Profil amin'ny orinasa - Shenzhen SOSLLI Technology Co., Ltd.
18650 Batteran'ny Lithium
Batteran'ny fitehirizana angovo
Batterie Lithium Power
Bateria hafanana ambany
Batteran'ny hatsiaka malalaka
Batteran'ny Titanate Lithium
Ny bateria bateria Lithium
3.7V fonosana Li-Ion
7.4V fonosana Li-Ion
11.1V fonosana Li-Ion
14.8V fonosana Li-Ion
18.5V fonosana Li-Ion
24 fonosana Li-Ion 24V
Famonosana Li-Ion 36V
Fonosan'i Li-Ion 48V
Fonosan'i Li-Ion 60V
72 fonosana Li-Ion
3.2V LiFePO4 fonosana
6.4V LiFePO4 fonosana
9.6V fonosana LiFePO4
Fonosana 12V LiFePO4
24 fonosana LiFePO4 24V
Kaody 36V LiFePO4
Fonosana 48V LiFePO4
Fonosana 60V LiFePO4
72 fonosana LiFePO4
Fahalalana momba ny bateria
Horonan-tsary amin'ny orinasa
Application & vahaolana
alalan'ny milina azo baikoina
Shenzhen SOSLLI Technology Co, Ltd dia hita ao amin'ny Distrikan'i Pingshan, Shenzhen, akaikin'i Hong Kong sy Macao, miaraka amin'ny fitaterana mety. Ny orinasa dia orinasa teknolojia matihanina matihanina miaraka amin'ny fampandrosoana, famokarana sy ny varotra amin'ny batterie Lithium Ion azo ampiasaina, PACK ary vahaolana amin'ny bateria. Niorina tamin'ny taona 2008 ny orinasa izay mitentina 8000 metatra toradroa. Amin'izao fotoana izao, manana orinasa maherin'ny 1600 ny orinasa, ekipa QC matihanina 110 ary ekipa teknika matihanina 60. Ny lafiny rehetra amin'ny famokarana amin'ny alàlan'ny fangatahana ny akora mandra-pahatonga ny vokatra vita dia arahiotin'ny mpiasan'ny QC. Ankehitriny dia manana departemanta bateria cylindrical, fonosana malefaka (Li-polymer) departemantan'ny bateria, departemantan'ny PACK ary ny departemanta rafi-pitantanana isika. Ny fanamboarana sela ion 18650 sy 14500 Lithium ion hatramin'ny 200,000Ah isan'andro. Mampiasa ny teknolojia sy fitaovana avo lenta, ny fomba fitantanana siantifika ISO 9001 ary ny fomba fanaraha-maso tsara kokoa, miantoka ny filaminana sy ny fahamarinan'ny vokatra. Ny vokatra batterie SOSLLI dia ankasitrahan'ny mpanjifa eran-tany. Miara-miasa akaiky amin'ny mpanjifa izahay mba hanomezana fiainana milamina kokoa sy haingam-pandeha lavitra, vokatra sy serivisy lafo vidy. Ny mpanjifanay dia mandray soa avy amin'ny vokatra midadasika SOSLLI sy fahaiza-manao teknika amin'ny bateria E-bisikileta, bateria herinaratra, bateria fitahirizana angovo, bateria 3C ary fonosana bateria namboarina manokana. Ny vokatra ampiasaina betsaka amin'ny telefaona finday, solosaina, fitaovana mora ampiasaina, fitaovana IoT, fakan-tsary nomerika, vokatra Bluetooth, vokatra jiro, GPS, DVR, E-sigara, E-borosy, E-kilalao, banky herinaratra, angovo UPS, savony avo RC UAV sy Robots, AGV, fitaovana momba ny herinaratra, fitaovana fitsaboana, sns.
SOSLLI dia nandalo ny rafitra kalitao ISO 9001: 2008 ary fanamarinana rafitra tontolo iainana 14001, ny vokatra avy amin'ny batterie dia nahazo UL, CB, IEC 62133, CQC, CE, RoHS, fanamarinana autorisialy andiany KC, ary fanamarinana mifandraika amin'ny fitaterana sy tatitra ny MSDS, UN38.3, tatitra momba ny fanaraha-maso ny fitaterana an-dranomasina sy ny rivotra, sns.
SOSLLI dia manana rafitra fananganana bateria mandroso, kabinetra efa antitra, fitaovana fitiliana BMS, 100v lehibe misy fitaovana famandrihana bateria li-ion amin'izao fotoana izao, milina fanodinana otomatis, milina fanodinana fanodinana otomatis ary foibe fitsapana. Ny foibem-panadinana SOSLLI dia afaka hahatratra: fitsapana fiarovana, fanadinana avo sy ambany fika, fitsapana ny tontolo iainana, fianjerana ary fitsapana akupungtotra, fitsapana fitsapana. Ekipa 66 R&D 80 isan-jato no injeniera zokiolona ao amin'ny indostrian'ny bateria ary 10 taona avy eo. Ny ivon-toeram-pikarohana sy fampandrosoana dia mirakitra elektronika, rafi-jiro, famatsiana herinaratra, teknolojia PACK, PV, sns.
Famatsiana SOSLLI OEM & ODM lithium ion vokatra sy vahaolana. Ny vokatra azontsika dia ampiasaina betsaka amin'ny indostrian'ny miaramila, ny fitsaboana ara-pitsaboana, ny famatsiam-bola, ny serasera, ny fiarovana, ny fitaterana, ny fitrandrahana, ny logistics, ny trano fanatobiana entana ary ny elektronika ho an'ny mpanjifa.
Manorina fifandraisana orinasam-pifandraisana tsara isika miaraka amin'ny Panasonic, Philips, Samsung, voltronicpower, Mindry, BOSCH, DJI, Linde, sns sns. Ny batteranay dia miaro ny tontolo iainana, fiarovana, fiainana lava, tombony tokana tsy manam-paharoa.
SOSLLI dia manandrana sehatra iraisam-pirenena hanomezana tolotra iray fiatoana. Tongasoa mitsidika ary mifandray aminay.
SOSLLI dia manana rafitra fananganana bateria mandroso, kabinetra efa antitra, fitaovana fitiliana BMS, 100v lehibe misy fitaovana famandrihana bateria li-ion amin'izao fotoana izao, milina fanodinana otomatis, milina fanodinana fanodinana otomatis ary foibe fitsapana.
Lithium Ion Battery sela, Batterie 20ah Lithium Ion, Ny batterie Lithium herinaratra, Power Battery Pack, Power Lithium Battery Pack, 3.6v Batteran'ny Lithium-Ion,